Fikafika 3 hamofona ny trano | Bezzia
Toñy Torres | 11/09/2021 16:00 | an-trano
Ny fofona fofona tsara dia tena ilaina mba hankafizanao tontolo iainana madio sy mandray olona. Mba hahatratrarana izany dia ilaina ny mitandrina ny fahadiovana sy ny fahadiovana tsara isaky ny efitranon'ny tranonao. Ny fanadiovana fotsiny dia tsy ampy, satria indraindray misy ny manolo-tena lesoka izay tsy mamela ny trano ho voadio tanteraka. Mba hahatonga ny trano ho maimbo foana dia afaka manaraka fika sasany ianao.
Ary tsy resaka camouflaging fofona ratsy amin'ny fresheners rivotra na menaka manitra. Ny lakile dia ny fahadiovana, amin'ny rivotra isan'andro ao an-trano ary amin'ny antsipiriany izay matetika no tsy raharahina, amin'ny fomba fanadiovana. Raha te-hanitra ny trano ianao dia holazainay aminao avy hatrany ny sasany amin'izy ireo torohevitra hanatrarana azy amin'ny fomba mora sy tsotra ary maharitra.
1 Ny trano manitra fofona dia manomboka amin'ny rivotra tsara
1.1 Fanadiovana trano sy kojakoja fanadiovana
1.2 Fetsy hahazoana fofona tsara ao an-trano
Ny trano manitra fofona dia manomboka amin'ny rivotra tsara
Ny mody rehefa avy niasa mafy nandritra ny andro tany am-piasana no ilaina haka aina kely. Fa raha tsy madio ny trano dia tsy misy fofona maimbo na misy fikambanana ratsy dia sarotra kokoa ny mankafy ny toetry ny soa izay tokony atolotry ny trano. Ny rivotra madio no fanalahidy hampisy fofona tsara ny trano ary tsy ilaina ny manokatra varavarankely tontolo andro.
Ny fanokafana ny varavarankely mandritra ny 15 ka hatramin'ny 20 minitra maraina dia ampy. Sokafy ny farafara handefasana ireo lambam-pandriana alohan'ny hanaovana ny fandriana. Mitadiava renirano hahatratrarana ny rivotra ivoho, hahomby kokoa izany. Amin'ity fihetsika tsotra isan'andro ity dia hahafahanao manafoana ny fofona ratsy avy amin'ny efitrano.
Fanadiovana trano sy kojakoja fanadiovana
Tsy ilaina ny mandany ora maro amin'ny fanadiovana raha tsy mandany fotoana amin'ny fanadiovana fitaovana fanadiovana ianao. Ny fonosana sy ny lambam-pandriana ao an-dakozia, ny mop, ny kifafa na izay fitaovana fampiasa matetika hanadiovana. rehetra ireo fitaovana ireo dia mitazona ny sisa tavela sy ny residu izay raha tsy diovinaIzy ireo koa dia miteraka fofona ratsy, bakteria, holatra ary zavamiaina bitika izay manimba fahasalamana.
Mba hisorohana an'io dia tsy maintsy diovy daholo ny fitaovana fanadiovana matetika, raha azo atao isaky ny ampiasaina. Ka rehefa tsy maintsy ampiasainao indray ireo fitaovana ireo mba hodiovina dia hataonareo ao anaty toe-javatra tonga lafatra izy io handaozana ny trano ho madio sy tsy hisy fofona ratsy. Mopy maloto, lamba misy residu ara-tsakafo na kifafa misy sisa tavela avy amin'ny gorodona, mba hanaparitahana bebe kokoa ny loto. Sorohy ny asa roa sosona tazomy ho vonona hatrany ny vokatra fanadiovanao.
Fetsy hahazoana fofona tsara ao an-trano
Ho fanampin'ny rivotra sy fanadiovana isan'andro dia azonao atao ny mampiasa tetika vitsivitsy hitazomana ny fofon'ny tranonao isaky ny mandeha. Eny tokoa, ialao ny simika misy fofona diso satria ho afaka hanao camouflage fotsiny ianao fa tsy hanafoana ny antony mahatonga ny fofona ratsy. Fa kosa afaka manandrana ny iray amin'ireto tetika ireto ianao:
Manomàna fitoeran-tsifotra ary afangaro rano amin'ny fanalefahana lamba. Isan'andro alohan'ny hanaovana ny fandriana dia esory amin'ny koba ity lambam-pandriana ity mba ho fofona vao nosasana ny farafara.
Kitapo sachet misy voninkazo maina. Lavender dia lavorary na dia azonao atao aza ny mampiasa potpourri sy ranom-borona vitsivitsy amin'ny fofona tianao. Apetraho ao anaty lalimoara ireo sachets vita amin'ny fofona, eo anelanelan'ny lambam-pandriana madio ary eny an-joron'ny tranonao toy ny fidirana amin'ny tranonao aza.
Bikarbonate amin'ny sela. Ny karipetra sy ny lamba matevina toa ny eo amin'ny sofa dia sarotra hosasana ary mirona hanangona loto be dia be, izay miteraka fofona ratsy. Indray mandeha isan-kerinandro, mamafa soda am-paty maina amin'ny karipetra sy sofa. Ny ampitso maraina dia mila banga sy bicarbonate hanaisotra ny fofona ratsy.
Ireo torohevitra rehetra ireo dia hanampy anao hitazona ny trano tsy misy fofona. Fa azonao atao koa ny mampiasa vahaolana izay haingon-trano koa, toy ny labozia manitra, mpandoro fofona na voninkazo maina. Miaraka amin'ny fihetsika kely dia hahazo trano fandraisana ianao izay ahafahanao miala sasatra sy hankafizanao ny tempolin'ny fandriampahalemana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Fetsy 3 hampamofona ny trano
Ahoana ny fomba hisorohana ny fivontosana amin'ny tongotrao rehefa mihazakazaka